नर्सको खुलासा - मर्नु भन्दा ठीक अघी एउटै कुरा गर्छन् मृत्‍यु हुनेहरु ,पत्याउनुहुन्छ ? - नर्सको खुलासा - मर्नु भन्दा ठीक अघी एउटै कुरा गर्छन् मृत्‍यु हुनेहरु ,पत्याउनुहुन्छ ? -
नर्सको खुलासा – मर्नु भन्दा ठीक अघी एउटै कुरा गर्छन् मृत्‍यु हुनेहरु ,पत्याउनुहुन्छ ?
उज्यालो प्रतिनिधि २ मंसिर २०७८, बिहीबार स्वास्थ्य/जीवनशैली
काठमाडौं । मृत्यु पछि के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन । संसारका मानिसहरूले मात्र अनुमान गर्छन् कि मृत्यु पछि मानव आत्माको के हुन्छ ? यसमाथि धेरै पुस्तकहरू लेखिएका छन् । यसका साथै मृत्युको मुखबाट फर्किआएको दाबी गर्ने धेरैलाई यो पनि भनिन्छ कि मृत्युपछि वास्तवमा के हुन्छ ? शरीर के भयो र आत्माले मृत्युको आडमा के देख्यो ? तर वास्तविकता कसैलाई थाहा छैन। यो सबै दावीमा आधारित छ। तर अहिले जुली नामकी एक नर्सले सामाजिक सञ्जालमा भनेकी छिन् कि मृत्यु हुनुअघि धेरैजसो मानिसहरु एकै खालका कुरा गर्छन् ।
अल्टिनोफोको न्युज रिपोर्टका अनुसार जुली नामको यो नर्स वास्तवमा एक नर्स हुन अर्थात्, एक नर्स जसले धेरै बिरामी व्यक्तिहरूको हेरचाह गर्छिन् । जुलीले आफ्नो आँखा अगाडि धेरै मरेको देखेकी छिन्। जुलीले सामाजिक सञ्जालमा बताइन् कि उनले अहिलेसम्म हेरचाह गरेका अधिकांश बिरामीले मृत्युअघि एउटै कुरा बोल्छन्। यो जुली आफैंको लागि एकदमै आश्चर्यको कुरा हो। तर यो सत्य हो।
जुलीले आफ्नो टिकटक खातामा यो खुलासा गरेकी छिन् । उनी टिकटकमा @hospicenursejulie नामबाट परिचित छन्, उनलाई ३ लाख ८० हजारले फलो गरेका छन् ।
जुलीले बताउँछ कि उनका धेरैजसो बिरामीहरूले मृत्युको ठीक अघि छाया देख्छन् । ऊ मरेका आफन्तहरूलाई हेर्न थाल्छ । वा कुनै आत्मासँग कुरा गर्न सुरु गर्छन, खासगरी आफन्तलाई । उहाँ घर आउँदै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। जुलीले थप भनिन् कि मृत्यु हुनुअघि धेरैजसोले म तिमीलाई माया गर्छु भन्ने गर्छिन् । वा आफ्नो आमाबाबुलाई सम्झन्छ, जो पहिले नै मरिसकेका छन्। उहाँले तिनीहरूलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ भनेर बताउछन ।
अर्को भिडियोमार्फत जुलीले मर्नुअघि आफ्ना मृत आफन्तलाई हेर्नु सामान्य कुरा भएको बताइन् । यसबाहेक मृत्युअघि मानव शरीरमा धेरै परिवर्तनहरू हुन्छन्। यसमा श्वासप्रश्वासको तरिका, छालाको रङ, ज्वरो आउने र स्वास्थ्य बिग्रने जस्ता समस्या हुने गर्दछ । जुलीका अनुसार मृत्युअघि मानिसको छाला बैजनी हुन्छ । यससँगै मुखबाट कडा गन्ध आउन थाल्छ । यी सबै कुराहरु अब मानिस धेरै दिन बाँच्न नसक्ने संकेत हो ।